ဒစ်ဂျစ်တယ် VIEWER ကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ DOWNLOAD လုပ်ပါ - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
ဒစ်ဂျစ်တယ် Viewer ကို 3.1.07
Windows operating system ကိုမွမ်းမံမှုများအသုံးပြုသူအချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးသေချာစေရန်အဖြစ် developer များအနေဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ကို manual သို့မဟုတ်အလိုအလျောက် update ကိုလုပျထုံးလုပျနညျးစဉ်အတွင်း၎င်း၏ပုံမှန်ပြီးစီးတားဆီးကြောင်းအမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်တစ်ဦးကုဒ် 80072f8f ရှိခြင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်းကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
Update ကို 80072f8f ပျက်ကွက်
ဒါဟာအမှားအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင် - စနစ်အချိန်မကိုက်ညီ update ကိုဆာဗာဆက်တင်ထဲကနေကွန်ယက် setting တွင်တစ်ဦးပျက်ကွက်ရန်။ ဒါ့အပြင်အချို့စာကြည့်တိုက်၏ encryption ကို system သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အတွက်ပြတ်တောက်ဖြစ်နိုင်သည်။
အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကျနော်တို့က encryption ကို disable လျှင်သည်, သငျသညျကိုချက်ချင်းပျက်ကွက်ပြီးဖွင့်နှင့်အခြားနည်းလမ်းဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှသာဆက်လက်မပြုလုပ်သင့်, ပေါင်းစပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရပါမည်။
Method ကို 1: အချိန်ကိုချိန်ညှိခြင်း
အဆိုပါစနစ်အချိန်များစွာကိုမှာ Windows components များရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါက operating system ကိုဆော့ဖ်ဝဲကို Activation, အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပြဿနာများကိုသက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ဆာဗာမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် setup ကိုအချိန်ရှိသည်, သူတို့သည်ဒေသခံနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ကြဘူးလျှင်, ပျက်ကွက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သြဇာလွှမ်းမိုးပါဘူးအရာကိုတစ်မိနစ်အတွင်း backlog, ကဒါမဟုတ်ပါဘူးသည်ဟုမထင်ကြနှင့်။ သင့်လျော်သော setting များကိုစေရန်အတော်လေးပိုင်ခွင့်ကို fix စေရန်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Windows တွင်အချိန်ထပ်တူကျအောင် 7
အထက်ပါလင့်ခ်မှာဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပြီး, ပြဿနာကိုဆက်ရှိနေသေးပါကလက်တော်ဖြင့်အရာခပ်သိမ်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ရှာဖွေမှုအင်ဂျင်တောင်းဆိုမှုကိုအတွက်စာရိုက်ခြင်းဖြင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိအထူးအရင်းအမြစ်များကိုမှာဖြစ်နိုင်ပါသည်လက်ရှိဒေသစံတော်ချိန်ထွက်ရှာပါ။
ဤဆိုဒ်များ၏တဦးတည်းအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်း, သင် System Setting ထဲမှာကမ္ဘာတဝှမ်းကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများအတွက်အချိန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်, အချို့ကိစ္စ၌၎င်း, တိရနိုင်။
Method ကို 2: လျှို့ဝှက်ကုဒ် settings ကို
Windows တွင်7ကို download အတွက် Microsoft ကဆာဗာများမှလုံခြုံရေး settings ကို updates များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့စံ browser ကို Internet explorer, ကြာပါသည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ setting များကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တစ်ဦးတည်းသာအပိုင်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။
သွားပါ "Control Panel ထဲက", တင်ပြချက်မုဒ်သို့ပြောင်းရန် "Small Icons" နှင့် applet ကိုရှာ "Internet Options ကို".
အဆိုပါ tab ကိုဖွင့်လှစ် "အဆင့်မြင့်" နှင့် SSL ကိုလက်မှတ်များနှစ်ခုစလုံးများ၏ရှေ့မှောက်၌ကျီးကန်းရိုက်ကူးများ၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာ။ တစ်ဦးတည်းသာလူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး installed လိမ့်မည်။ ဤအခြေလှမ်းများပြီးနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ OK ကို နှင့်စက် reboot ။
ကသက်တမ်းတိုးသို့မဟုတ်မပါလိမ့်မည်ဆိုပါကအဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ငါတို့နောက်ကျောတူညီတဲ့လုပ်ကွက် IE ကိုဆက်တင်များသို့သွားနှင့်အစက်အပြောက်အပေါ်စစ်ဆေးမှုများထားတော်မူ၏။ သငျသညျကိုသာဖယ်ရှားခဲ့တသော်လည်းမနှစ်ဦးစလုံးကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းသတိပြုပါ။
Method ကို 3: ကွန်ယက်ကို parameters တွေကို Reset
Network မှ setting များကိုကိုအလွန်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ update ကို server ကိုမှပို့ပေးတောင်းဆိုလမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအဘို့, သူတို့မမှန်ကန်ကြောင်းတန်ဖိုးများရှိသည်နှင့် default မှပြန်လည်သတ်မှတ်မှုရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မည်။ ဤသည်၌ပြစ်မှားမိသည်ကို "Prompt ကိုဆင့်ဆို"တင်းကြပ်စွာစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုဖွင့်ပါ။
Windows7မှာ "command line ကို" enable လုပ်နည်း: ဆက်ဖတ်ရန်
ကျနော်တို့က console ကိုဖျော်ဖြေခံရဖို့အမိန့်ပေးအောက်တွင်။ အဆိုပါ sequence ကိုအရေးမပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကလစ်ဝင်ပြီးနောက် « ENTER »နှင့်အောင်မြင်သောပြီးစီးအပေါ်သို့ - ထို PC ကို restart ချလိုက်ပါ။
netsh int ip မှပြန်လည်စတင်အားလုံး
netsh winsock မှပြန်လည်စတင်
netsh winhttp မှပြန်လည်စတင် proxy ကို
Method ကို 4: စာကြည့်တိုက်၏မှတ်ပုံတင်မည်
အချို့သော system ကိုစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူ, သူတို့ကရိုးရိုးမသုံးလို့ရပါတယ်နိုင် "ကိုချွတ်ပျံသန်း" မှတ်ပုံတင်, နဲ့ Windows update ကိုတာဝန်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင် re-register သူတို့ကိုရန်လိုအပ်ပါသည် "အဖြစ်" လူအပေါင်းတို့ပြန်လာနိုင်ရန်အတွက်။ ဒီအလုပျထုံးလုပျနညျးမြားကိုလညျး၌ပြစ်မှားမိသည်ကို "Prompt ကိုဆင့်ဆို"စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ဖွင့်ပါ။ သင်းနေသောခေါင်းစဉ်:
ဤစာကြည့်တိုက်ကိုတိုက်ရိုက်မှီခိုအကြားရှိ, မရှိမသိရသကဲ့သို့, အမိန့်ကိုလိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ပညတ်တော်တို့ကိုကွပ်မျက်ပြီးနောက် reboot နှင့် upgrade ကြိုးစားပါ။
သင်က Windows upgrade အခါ, သူတို့ကိုအထက်တင်ပြနည်းလမ်းတွေဖြေရှင်းဖို့အမြဲတတ်နိုင်အတော်လေးမကြာခဏဖြစ်ပျက်လျက်နှင့်မဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမှားယွင်းမှုများ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင် system ကို reinstall သို့မဟုတ်ပါကဘေးကင်း view ၏အချက်အနေဖြင့်မှားယွင်းနေကြောင်း updates များကို install လုပ်ဖို့မရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်ဖြစ်စေ။
ဗီဒီယို Watch: The nightmare videos of childrens' YouTube and what's wrong with the internet today. James Bridle (စက်တင်ဘာလ 2019).